Iimpawu kunye nokubalulwa kweMoto Z4 kuqinisekisiwe | I-Androidsis
Iimpawu kunye nokubalulwa kweMoto Z4 kuqinisekisiwe kukuvuza kwayo okutsha
Iingxelo zamva nje zidize oko IMotorola yokuqalisa uthotho lweMoto Z zeefowuni kungekudala. Ekuqaleni kwalo nyaka, @OnLeaks Iinguqulelo ekwabelwana ngazo ze-Motorola smartphone I-Moto Z4 Play, ke ukufika kwayo, kunye nohlobo oluqhelekileyo, sele ivukile iinyanga ezininzi.
Ngo-Matshi, iKhomishini yoNxibelelwano ye-Federal (i-FCC) yamkele ifowuni entsha ye-Motorola ebizwa ngokuba yi "foles". Ifowuni enye kuthiwa inegama lekhowudi yangaphakathi efana ne "raya." Yonke into yalatha kwinto eyi Moto Z4, zazo, kwesi sihlandlo, iimpawu kunye neenkcukacha zayo zihluzwa kwakhona, njengexesha elidlulileyo.
Kutshanje kufunyenwe ukuba ifowuni ipakishwe ngamanani aphakathi kwinqanaba, ngaloo ndlela kuqinisekiswa ukuvuza kwangaphambili. Kwangoko kule nyanga, u-Evan Blass wabelana ngokunikezelwa ngefowuni ye-Moto Z4, apho ukubonakala okuqhelekileyo kweli candelo liphakathi.
Ukunikezelwa kweMoto Z4
Amaxwebhu eFCC 'eefileles' anenombolo yemodeli 'XT1980-3'. Ngokutsho kwezi, iselfowuni inikwe amandla yi-chipset Snapdragon 675 kwaye iya kufika nge-4 GB okanye i-6 GB ye-RAM. Inokuza zombini i-2.1GB kunye ne-64GB UFS 128 yogcino ongakhetha kuzo. Iya kupakishwa nge-3,600 mAh ibhetri. Kwelinye icala, iFCC ityhila ukuba iadaptha yamandla e-serial ixhasa inkxaso ye-18-watt ekhawulezayo yokutshaja.
Isixhobo siya kuxhotyiswa ngekhamera enye ngasemva. Oku kuyakuba Inzwa ye-megapixel engama-5 ye-S1KM48SP ngetekhnoloji ye-Q eya kuthi ibambe iifoto ze-megapixel ezili-12 ngokwendalo. Ukuthatha i-selfie, ifowuni iya kubandakanya inzwa ye-5-megapixel ye-Samsung S2K5X25.
Iifilthi zeFCC azinalo ulwazi malunga nobungakanani bescreen sakho. Nangona kunjalo, ifowuni iyaziwa ukulinganisa i-157 x 75mm, Efana nobukhulu beMoto G7 Plus eza ne-6.2-intshi IPS LCD isikrini esinotshi yasemanzini. Ke ngoko, iMoto Z4 inokuthi ifike ngephaneli yediagonal elinganayo.
IMoto Z4 Dlala ii-specs ezivuzayo: i-sensor ye-MP ye-48, i-SD675 kunye nokuveza ngakumbi
Yintoni eyaziwayo malunga nescreen esiphathwayo kukuba Iya kuxhotyiswa ngescreen sokufunda ngeminwe esikrinini esibonelelwe yiGoodix. I-smartphone kulindeleke ukuba ize nokulayishwa kwangaphambili I-Android 9 Pie ngezongezo ezimbalwa, phantse kwimeko yayo emsulwa. Okokugqibela, ifowuni iya kuba nenkxaso ye-Moto Mod.
Kutshanje, umntu ovuvukayo ukutyhile oko i-terminal iya kufumaneka ngexabiso le- $ 399. Ikwaveze ezinye izinto zefowuni ezinje ngokulinganiswa kwe-IP67 kunye nememori elandelayo: 4GB RAM + 64GB yokugcina kunye ne-6GB RAM + 128GB yokugcina.
Umngenisi ngaphakathi ukwatyhile ukuba i-Motorola iyakuphehlelela nefowuni ephambili Umlilo iZ4 Force ngeqonga mobile Snapdragon 855 kunye ne-8 GB ye-RAM. Oku kulindelwe ukuba nescreen esifanayo neMoto Z4.
Ezinye izinto ezinamahemuhemu zeZ4 Force zibandakanya i-128GB yogcino lwendalo, iskena sokubonisa ngeminwe, ibhetri eyi-3,230 mAh, kunye nokuseta kwekhamera kathathu ngenzwa ephambili ye-48-megapixel, inzwa ye-13-megapixel kunye nelensi yefowuni. Inokuba ngamaxabiso nge- $ 650.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu kunye nokubalulwa kweMoto Z4 kuqinisekisiwe kukuvuza kwayo okutsha
Khuphisana nabanye abadlali ngebhayisekile yakho ye-BMX kwi-Stickman Bike Battle
Izixhobo ze-Samsung eziya kuhlaziywa kwi-Android Q